အလုပ်သမားရှားပါးမှုကြောင့် ဂျပန်ကုမ္ပဏီများ အလုပ်သမားအသည်းအသန် ငှားရမ်းနေရ
To go with AFP story "Japan-economy-employment-social" FOCUS by Daniel Leussink In this picture taken on December 18, 2015, workers repair clothes ataseniors' work centre in Tokyo. Japan's silver-haired workforce is everywhere these days -- from wrinkled men waving glow sticks at construction sites to checkout counter clerks or caregivers for the very old. AFP PHOTO / Toru YAMANAKA / AFP / TORU YAMANAKA (Photo credit should read TORU YAMANAKA/AFP/Getty Images)
အလုပ်သမားရှားပါးမှုပြဿနာ အကြီးအကျယ် ဆိုးရွားလာမှုကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍရှိ ကုမ္ပဏီများမှာ အလုပ်သမားများကို အသည်းအသန်းငှားရမ်းကာ၊ ဝန်ထမ်းကိုလည်း မထွက်အောင် ထိန်းသိမ်းနေရကြောင်းသိရသည်။
အိမ်ရှင်မများနှင့် ပင်စင်စားများပါ အလုပ်လုပ်ရမည့် အနေအထားမျိုးဖြစ်နေသည်။ အချို့ကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်ခွင်ကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက လုပ်ခလစားတိုးပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်နေရပြီး အချို့ ကုမ္ပဏီများတွင်တော့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အချိန်ကို လျော့ချခြင်း၊ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်မည့် အစီအမံများကို ဆိုင်းငံ့ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နေရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ၂၃ သုံးနှစ်အတွင်း ၂ဒသမ၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျသွားသည်။ ထိုအနေအထားမှာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်သက်ငယ် လူဦးရေ လျော့ကျလာခြင်းကို ထပ်ဟပ်နေသည်။
ဂျပန်ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သော တန်ကန်ဘဏ်၏ စစ်တမ်းတစ်ခုတွင် အလုပ်သမားရှားပါးမှုကြောင့် ညည်းညူနေသော ကုမ္ပဏီအရေအတွက်မှာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
‘အချိန်ပိုင်း အလုပ်ရှာနေတဲ့ လူအရေအတွက်က သိသိသာသာကြီးကို လျော့သွားတယ်။ အထူးသဖြင့် တိုကျိုမြို့လယ်အပြင်က နေရာတွေမှာပေါ့။ အလုပ်သင်တွေကို အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းအဖြင့်ခန့်ပြီး လစာတိုးပေးမယ်လို့ အကြံပေးတော့ သူတို့က မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့။
ဒါပေမယ့်လည်း ငွေဝင်နေကြတုန်းပဲ’ ဟု တိုကျိုအရှေ့ပိုင်း ချီဘာရှိ ဆန်းရှော့ပင်းမော CEO ဆက်သ် ဆူလ်ကင်က ပြောသည်။
အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းပပျောက်လုနီးပါးသော အခြေအနေရောက်နေသဖြင့် ကုမ္ပဏီများမှာ အခြားသော အလုပ်သမား အရင်းအမြစ်များကို ရှာဖွေနေရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ မက်ဒေါ်နယ်ကုမ္ပဏီဆိုလျှင် အလုပ်သမားအင်အားကို လူငယ်များထားနေခြင်းကို ကျော်လွန်လျက် အိမ်ရှင်မများကိုပါ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ဝင်လုပ်အောင် ရည်ရွယ်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။
သားသည်အမေ အိမ်ရှင်မတစ်ဝက်ကျော်က ၎င်းတို့အနေဖြင့် အလုပ်လုပ်လိုကြသော်လည်း သင့်တော်သော အလုပ်မျိုးရှာမတွေ့ကြောင်း အလုပ်အကိုင်သုတေသနစင်တာက ပြုလုပ်သည့် အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီး ၄၀၀၀ ကျော်ပါဝင်ဖြေဆိုထားသည့် စစ်တမ်းအရသိရသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် တစ်နေ့လုံး အလုပ်လုပ်ပါက မိသားစုတာဝန်များ မကျေပွန်မည်ကို စိုးရိမ်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
ယခင်ဆောင်းပါးဘင်္ဂလီများကို သယ်ပို့ပေးနေသည့် လှေများကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဖျက်ဆီး
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးမူးရစ်ကြီးကျေးရွာ၏ (၈၈) ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းဘုံကထိန် ပဒေသာပင် လှည့်လည်ပွဲ